Umgangatho, ukujikeleza kwemoto eyenzelwe wena, ikhamera yemoto, iprojektha ye-LED eyenziwe e-China, abavelisi -I-Dongguan Yingjia Electronic Technology Co, Ltd
I-elektroniki ye-Yingjia ibungcali kuba inzima. Ngenxa yokuba ingcali, kufanelekile ukuba ukhethe!
10 intshi Android inkqubo yokukhangela
Ngaye ekhokela indlela, ungaze ulahleke. Irediyo yemoto ye-stereo ye-10.1-intshi ene-GPS yokukhangela Iscreen somdlali we-multimedia sixhasa i-WiFi / ikhonkco enesipili / i-USB + ikhamera yokugcina, esenza ukuba ukuqhuba kwakho kukhuseleke
Ikhamera ye-4.3 intshi ye-HD
Kulula ukuyifaka, efikelelekayo i-HD 1080P yekhamera ye-Dvr yekhamera, i-4.3-intshi ephezulu yokurekhoda ukurekhoda ukurekhoda imoto ye-lens ezimbini, i-DVR ye-4.3-intshi ephezulu yokucacisa ngombono ebusuku ukurekhoda imoto yokurekhoda ineendlela ezimbini zesakhelo esimnyama negolide ukhetho. Uyilo lomntu: yonke into yenzelwe ukhuseleko lwakho kuphela. * Ubungakanani besikrini se-LCD: 4.3 intshi 16: 9â € ‹
I-5.18 intshi ye-HD yokurekhoda ukuqhuba
Isiphelo serekhodi yokuqhuba ephezulu kunye nesibhakabhaka se-HD DVR ngeqokobhe lesinyithi, isibuko semoto esibonisa ngasemva esingu-5.18-intshi HD yekhamera yemoto, iscreen sokucofa u-HD 1080P sokurekhoda ukurekhoda ngeelensi zangaphambili nangasemva kunye nekhamera yangasemva engenamanzi. (Igobolondo leplastiki liyanyanzeleka) Iindidi ezimbini zezinto ozikhethayo.
7 intshi HD ezimbini zokurekhoda ukurekhoda kwekhamera
Vumela ukuba ube nembono ephezulu yokurekhoda umbono wasebusuku owenziwe nge-alloy zinc. Iscreen sokuchukumisa imoto esine-7-intshi ephezulu yekhamera yemoto eyi-7-intshi irekhoda yelori, imoto ye-DVR ngaphambili nangemva kweekhamera ezimbini, irekhoda yemoto yasebusuku, ikhamera yemoto enenkcazo ephezulu yokubuyisela umva, ekulula ukuyifaka kwaye kulula ukuyisebenzisa, efikelelekayo 7- Isishicileli semoto esichazayo esine-intshi ephezulu, yonke into yenzelwe ukhuseleko lwakho ngenxa yakho.
I-10 intshi ye-HD umbono wasebusuku osasaza isishicileli sokuqhuba
Umbono othembekileyo we-YJ wokuchaza ebusuku ukuqhuba irekhoda, kukukhapha ngemifanekiso ephezulu ye-2K kunye nemisebenzi etyebileyo. Umbono ebusuku wokurekhoda ukurekhoda, nokuba urekhoda imifanekiso enenkcazo ephezulu ebusuku okanye emini, yonke into yenzelwe ukhuseleko lwakho lokuqhuba kuphela.
Ikhamera yemidiya ye-HD eyi-12 intshi yokusasaza imoto
Isingeniso seMveliso ukuthengisa indawo yokunceda: Umgangatho ophezulu we-12-intshi yokuthinta isikrini semoto ye-DVR HD umbono wasemva kwesipili sokuqhuba ukurekhoda ikhamera yevidiyo erekhodayo ebusuku umbono usasaza isidlali semithombo yeendaba. Yonke into yenzelwe ukhuseleko lwakho kuphela.